विभत्स अपराध-ससुरालीको बंश मासेर ‘डिभोर्स’को बदला ! हत्या गरेर किन रुखमा झुण्डिए रामबहादुर ? «
विभत्स अपराध-ससुरालीको बंश मासेर ‘डिभोर्स’को बदला ! हत्या गरेर किन रुखमा झुण्डिए रामबहादुर ?
प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ००:०५
मान्छे कतिसम्म क्रुर हुन सक्दोरहेछ भन्ने मंगलबार पाँचथरको मिक्लाजुङमा देखियो । दुई परिवारको वंश नास गर्ने गरी एक युवकद्वारा भएको ९ जनाको सामूहिक हत्याले धेरैलाई स्तब्ध बनायो ।
घटनाको समग्र अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट पठाएको एसपी उमाप्रसाद चर्तुवेदीको टोली पठाएको छ भने प्रदेश र जिल्लाबाट पनि टोली खटिएको छ । (अनलाइनखबर बाट)